AlShabab oo maxkamad soo taagtay askari ka tirsan DF iyo qaab yaab leh oo loogu soo celiyey gurigiisa – Radio Baidoa
AlShabab oo maxkamad soo taagtay askari ka tirsan DF iyo qaab yaab leh oo loogu soo celiyey gurigiisa
Dhacdo aad loola yaabay oo si weyn looga hadal haayo Waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa qabsatay sarkaal ka tirsan ciidamada Taraafikada wadooyinka ee dowladda federaaalka, sarkaalkaasi oo ka howlgala isgoysyada magaalada Muqdisho.
Sarkaalkaan oo lagu naaneeso Oday Cabdulle ayaa xaaskiisa waxay ka dacweysay maxkamadda Al-Shabaab ee Tooro-toorow, iyadoo ka cabaneysay inuu dhigay biil la’aan, hase ahaatee AL-Shabaab ayaa tab cajiib ah u adeegsatay qabashada sarkaan xili uu howshiisa kala hagida gaadiidka ku guda jiray.
Labo nin oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa ku diyaarsanaa goobta uu ka howlgalayay, waxaana marka hore laga soo wacay taleefanka, loona sheegay waxa laga rabo, iyadoo lagu amray in uu soo raaco labada nin ee goobta ku diyaarsaneyd oo ku socday Mootada nooca dheereeya ee seddax qaadka ah, wuxuuna askariga taraafikada uu si degan u aqbalay hadalka taleefanka loogu sheegay.
Sarkaalka oo dharkiisa taraafikada labisan ayay ku kaxeysteen labada nin ee Al-Shabaab usoo direen, waxaana la geeyay maxkamadda deegaanka Toora-toorow ee gobolka Sh/hoose, halkaasi oo qaadigii maxkamadda la horgeeyay.
Markii loo sheegay sababta lagu soo dacweeyay iyo in xaaskiisa ka cabaneyso biil la’aan ayaa waxaa uu qaadigii u sheegay in ay been sheegeyso xaaskisa, bil walbana uu biilkeeda siiyo. Nasiib wanaag waxaa marqaati fur u noqday sarkaalka dacweysan fariimaha adeega EVC ee lacagta la iskugu tuuro oo taleefankiisa laga dhex helay bil walbo inuu u diri jiray 150 dollar. Sidaasina loogu waayay eedeymaha xaaskiisa usoo gudbisay.
Qaadigii Shabaab ayaa ku dhawaaqay in Oday Cabdulle oo ka tirsan ciidamada taraafikada uu wax danbi ah laheyn, isla markaana lagu celiyo goobtii uu ka howlgalayay ee laga soo qabtay, waxaana la keenay halkii laga qaaday isagoo labisan dareyska ciidamada taraafikada, iyadoo aan wax dhibaato ah la gaarsiin.